Kedu ụdị ihe dị mma maka ijikwa ọnụ ụzọ ime ụlọ?
Ime ụlọ bụ ebe ndị mmadụ ga -ezu ike, mmetụta ịchọ mma n'ozuzu ya na -adịkwu ọkụ ma dịkwa jụụ. Ogwe ọnụ ụzọ ime ụlọ a na -ahụkarị n'ahịa nwere ihe anọ, alloy zinc, igwe anaghị agba nchara, alloy aluminom na ọla kọpa dị ọcha. Aka ụzọ ime ụlọ nke ihe dị iche iche nwere charac dị iche iche ...
Kedu ihe kpatara eji eji ọnụ ụzọ pere mpe ewu ewu na ahịa?
site na nchịkwa na 21-10-08
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ejiri ọnụ ụzọ pere mpe enweta nlebara anya zuru oke site n'ahịa. Ọ bụ ngwaahịa ama ama n'ịntanetị. A na -akpọkwa mkpịsị aka ụzọ pere mpe nke Italiantali, aka ụzọ osisi nke nwere otu agba, wdg, a na -akpọkwa ha dị iche na mpaghara dị iche iche ...
Kedu ihe ndị na -emetụta ọnụ ahịa nke ọnụ ụzọ ụlọ?
Aka ụzọ ime ụlọ na -adịkarị na ndụ anyị. Ha bụ otu n'ime ngwa ngwaike dị mkpa maka ezinụlọ ọ bụla. Ego ole bụ ogwe ọnụ ụzọ ime ime izugbe? Ọnụahịa ya bụ isiokwu nke ọtụtụ ndị enyi na -etinyekwu uche na ya. Isi ihe na -emetụta ọnụahịa nke ọnụ ụzọ ime ụlọ na -eji aka ...
Kedu ihe bụ isi ihe maka ịme aka ụzọ ime ụlọ
A na -ahụ ịhe ọnụ ụzọ ime ụlọ n'ọtụtụ ebe na ndụ kwa ụbọchị, ma na mpaghara obibi, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ebe ịzụ ahịa na ebe ndị ọzọ, enwere ike ịhụ aka ụzọ ime. A na -ekewakwa ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ime ụlọ n'ime ọkwa. Enwere ọkwa atọ dị elu, ọkara a ...
Ụzọ ole ka ị maara gbasara ịgwọ ngwaike elu?
Mkpuchi mkpọchi ọnụ ụzọ aluminom na -ezo aka na akụkụ igwe ma ọ bụ ihe eji eme ngwaike, yana ụfọdụ obere ngwa ngwaike. O nwere oke ihe eji eme ihe na ngwa di iche iche. Enwere ike ekewa ngwaike nkịtị n'ahịa: ngwaike kwa ụbọchị, ngwaike ihe owuwu, na hardwar ...
Onye nche, A mụrụ ya ka ọ bụrụ onye pụrụ iche
Site na Manhattan ruo Sydney Opera House ruo Shimao Cloud, na n'akụkụ anyị, dị ka onye bịara ọhụrụ na ngwaahịa na windo, ọnụ ụzọ enyo enyo dị warara egosipụtala ugboro ugboro n'ime iri afọ ka amụrụ ya. Ngwaahịa ọhụrụ a pụrụ iche nke ọnụ ụzọ na -eji nwayọọ nwayọọ na -agbanwe site na akwụkwọ akụkọ ruo cla ...
Mkpọchi ọnụ ụzọ iko YALIS na -akọwapụta ihe bụ ọmarịcha ndụ
Ọmarịcha Site na nraranye na nkọwa Fastidiousness Site n'ịhụnanya nke ndụ Ndụ site na njikwa nkọwa Njirimara pụrụ iche, ihe ijuanya na-enweghị atụ Ịkọwapụta ndụ mara mma Akụrụngwa Sophistication na-esite na ihe dị elu YALIS GUARD usoro iko ...
Oge ngosi ngwaahịa ọhụrụ | CHEETAH & Artware
Enwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke ndụ, nke na -eju afọ, anaghị agbanwe agbanwe, ma ọ bụ ihe ọhụrụ na -atọ ụtọ. Anyị na -ahọrọ ka ọnyà ghara inwe ọnyà, ka anyị mebie echiche nke anya, yana gbakwunye ụfọdụ ihe nka na ndụ anyị. Aka ọnụ ụzọ YALIS, CHEETAH, mụrụ. Ị nweta i ...
Kedu ule kwesịrị ime maka ngwụcha akụrụngwa akụrụngwa
N'edemede gara aga, anyị kwuru maka otu esi ekpe ikpe ngwụcha ngwaike ụzọ site n'elu. Oge a anyị ga -ekwu maka ihe ekwesịrị ka eme maka ọgwụgwọ elu. Nrụcha nke ngwaike ụzọ abụghị naanị na -emetụta ịma mma na mmetụta nke ọnụ ụzọ ...
Ajụjụ Onye Mmebe YALIS | Hanson Liang
Dịka onye nrụpụta ọkachamara nwere ahụmịhe afọ 12 na ngwaike ọnụ ụzọ, YALIS bụ onye nrụpụta ihe na ngwaike ọnụ ụzọ pere mpe, na ndị na-emepụta ọdịdị ya bụ ndị okike na-enye ngwaahịa ahụ ọdịdị na mkpụrụ obi. Taa, anyị nwere ihe ndabara ịkpọ Hanson Lia ...
Na -atụ anya Ọdịnihu, YALIS ga -eso gị gaa n'ihu
site na nchịkwa na 21-05-20
Okwu mmalite: Ọgba aghara nke COVID-19 mere emeela ka ụlọ ọrụ ghara ịga n'ihu na ọkụ n'ọgwụgwụ ọwara, mana ha na-agbagharị n'oké mmiri iji chọta ụzọ ha ga-esi pụọ. —— site na European Chamber of Commerce na China Na mbido 2020, COVID-19 malitere. Ka ọ dị ugbu a, ntiwapụ zuru ụwa ọnụ nwere ...
Nhazi nke ụlọ dum nke Ara na-abịa Site na nkwalite ogo ọkwa oriri na nkwalite nkwalite echiche nke ime ụlọ, ịhazi ụlọ niile abụrụla ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha nke oriri ezinụlọ. China bụ mba nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke c ...